I-Semalt Islamabad Expert: Kuyini Ukudlulisa Ugaxekile Ku-Analytics & amp; Ungakuvimbela Kanjani?
I-Semalt Islamabad Expert: Kuyini Ukudlulisa Ugaxekile Ku-Analytics & Ungakuvimbela Kanjani?
Uma uthola i-spam yomgwaqo engalindelekile nokudluliselwa ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kusho ukuthi isayithi lakho liye lahlaselwa ngabakwa-spammers. Kuyinkinga ekhulayo yabama-webmasters, abathengisi, amabhulogi kanye nabaphathi bezokuxhumana bezenhlalo njengogaxekile wokudlulisela umonakalo kungalimaza isayithi lakho futhi kube nzima ukuzinaki.
Yehla kulezi zeluleko eziphoqayo kusuka kuSohail Sadiq, isazi sezinhlelo zokusebenza ze-Digital Semalt .
Ukugaxekile kogaxekile kudalwe ngabakwa-crawlers, izigaxe, kanye nebhobhu ngenhloso yokukuheha kumasayithi okudlulisela futhi ukukhuthaza ukuba uthenge imikhiqizo ku-intanethi. Le spam ihlose isimo se-analytics yesayithi sakho futhi isikhule eminyakeni yamuva. Ugaxekile omusha wokudlulisela osanda kuqaliswa yi-link.zhihu.com. Uma uvakashela le URL noma efanayo, uzoqondiswa kabusha ekhasini lapho abagaxekile befuna ukuthi uthenge imikhiqizo yabo noma bathuthukise okuqukethwe kwabo ku-intanethi. Ngokuvamile ugaxekile we-referrer uhlose ukugqugquzela amagciwane kanye ne-malware kwi-intanethi, futhi kufanele uqaphele ngenkathi uvakashela izixhumanisi zogaxekile uphinde upheqa ku-intanethi. Qinisekisa ukuthi uzilahla ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
Ungase ucabange ukuthi i-spam yokudlulisela ingozi ngoba yandisa ithrafikhi kuwebhusayithi yakho, kodwa awukho kahle..Amabhodwe neziphequluli zenza lolu hlobo lomgwaqo, futhi lokho okutholayo akulona okwangempela. Ngokusobala, kuzokwandisa izinga lakho lokunciphisa futhi isikhathi esichithwa kuwebhusayithi yakho sibili sesibili. I-traffic ghost ngeke ikuthole imiphumela emihle futhi izokuhlanganisa idatha ye-Google Analytics. Ukuxhomekeka kokugaxekile kogaxekile kuyisu elimnyama le-SEO isu futhi lisetshenziswe izinkampani ezingekho emthethweni nabanikeli benkonzo.
Ungavimbela kanjani ugaxekile wokudlulisela?
Ungakwazi ukuvimba kalula ugaxekile wokudlulisela ekuboniseni ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Ngenxa yalokhu, kufanele udale izihlungi futhi ungabandakanyi ithrafikhi esolisayo nephansi. Ukukhipha lolo hlobo lomgwaqo, iya kusigaba se-Admin se-akhawunti yakho yakwa-Google Analytics bese uchofoza ku-Izinketho zezihlungi. Lapha, kufanele ukhethe okukhethwa kukho kokufaka i-Filter ukuze iWizard iqale. Isinyathelo esilandelayo ukwenza igama lemifanekiso njenge-darodar.com, link.zhihu.com, noma into enjengale. Qinisekisa ukuthi ukhiphe wonke ama-URL we-spam wokudlulisa ngale ndlela, futhi ama-URL amaningi angaphinda ahlungwe kalula. Khetha okukhethwa kukho okuhlunga ngokwezifiso bese ukhetha umthombo womkhankaso kusigaba se-Field Filter.
Lapha kufanele futhi wengeze i-darodar.com, noma isixhumanisi.zhizhu.com emibhalweni yefriji yesampuli ukuze uthole konke okukhishiwe. Kungenzeka ukwengeza ama-URL amaningi kuzihlungi; ngenxa yalokhu, akufanele ucacise i-URL futhi ungenza izihlungi zogaxekile zokudlulisa umhlaba wonke noma zesifunda ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Ngokusetha izihlungi nokuzikhandla, kungenzeka ukuthi uthuthukise ukunemba kanye nekhwalithi yedatha yakho ye-Google Analytics. Ungakwazi futhi ukuzivikela wena kanye nesayithi lakho kusuka kuma-URL kanye nama-URL asolisayo bese unciphisa imikhuba yogaxekile yokudlulisa ngezinga elikhulu. Konke lokhu ngeke kuthathe isikhathi, futhi imiphumela ihlale ihle kakhulu, ngakho kufanele uqhubeke udala izihlungi ezintsha kuzo zonke ama-URL asolisayo ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics.